खाडीको चर्को घामले शुक्रकीटमा ह्रास, खाडीबाट फर्कने २० प्रतिशत पुरुषहरु समस्या देखियो - Valley Khabar
Homeसमाचारखाडीको चर्को घामले शुक्रकीटमा ह्रास, खाडीबाट फर्कने २० प्रतिशत पुरुषहरु समस्या देखियो
खाडीको चर्को घामले शुक्रकीटमा ह्रास, खाडीबाट फर्कने २० प्रतिशत पुरुषहरु समस्या देखियो
July 27, 2019 dhan kush समाचार
खाडीको चर्को गर्मीमा श्रम गर्नेहरुको शुक्रकीटमा ह्रास आएको खबर आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ ।
खाडीबाट फर्कने २० प्रतिशत पुरुषहरुमा शुक्रकीटको गुण र संख्यामा ह्रास आएको परीक्षणहरुले देखाएका छन् ।
समाचार अनुसार कतार, साउदी अरब र मलेसियामा काम गरी फर्केका युवा र तिनका पत्नी परामर्श तथा उपचारका लागि अस्पताल एवं निःसन्तान केन्द्रमा धाउने गरेका छन् ।
‘हरेक प्रजनन योग्य पुरुक्षमा औसत प्रतिमिलिलिटर दुई करोडभन्दा बढी शुक्रकीट हुनुपर्छ’, अन्नपूर्ण लेख्छ– खाडी मुलुकमा काम गरी फर्केका १५ देखि २० प्रतिशत पुरुषमा त्योभन्दा कम संख्यामा शुक्रकीट देखिएको छ ।
यी हुन् शुक्रकिट मार्ने र पुरुषलाई बाँझो बनाउन सक्ने चिजहरु
के तपाइँले निकै कसिलो पेन्टी लगाउनुहुन्छ ? चाउमिन खाँदा सोयाको सस बढि नै खानुहुन्छ अनि काखमा ल्यापटप राखेर लामै समय चलाउनुहुन्छ ? खबरदार, यदि यसो गरिरहनुभएको छ भने तपाइँले थाहा नपाइकनै आफ्नो पुरुषत्व कमजोर बनाइरहनु भएको छ । किनकी यी वस्तुहरुले तपाइँको शुक्रकिट नष्ट गरिरहेका हुन्छन् ।
एक अध्ययन अनुसार विश्वमा हरेक ५ मा एक जना पुरुषमा विर्यमा शुक्रकिटको मात्रा कम हुने समस्या देखिन थालेको छ । एक मिलिमिटर विर्यमा डेढ करोड भन्दा कम शुक्रकिट हुनुलाई शुक्रकिटको कमी अर्थात् लो स्पर्म काउन्ट भनिन्छ ।
अध्ययन अनुसार बढि कसिलो अण्डरवेयर लगाउने पुरुषमा शुक्रकिटको उत्पादन निकै कम हुने गरेको पाइएको छ । अध्ययनका क्रममा १ सय २० दिनसम्म अत्यन्तै कसिलो पेन्टी लगाउने पुरुषमा शुक्रकिटको संख्या शत प्रतिशत सम्म घटेको पाइएको छ ।
बढि कसिलो पेन्टीले अण्डकोषको तापक्रम बढाउने र त्यसबाट शुक्रकिटको उत्पादन घट्ने बताइउको छ । यसलाई टेस्टीकुलर हाइपरथर्मिया भनिन्छ ।
मोटोपना बढ्दै जाँदा शुक्रकिटको संख्या घट्दै जाने देखिएको छ । मोटोपनाको मापक मानिने बडी मास इन्डेक्स २४ भन्दा बढि हुँदा २२ प्रतिशत शुक्रकिटको संख्यामा गिरावट आउँछ । बढि दुब्लो हुनुपनि पुरुषत्वको हिसाबले राम्रो होइन ।
बिएमआइ १८.६ भन्दा कम हुनेहरुमा विर्य तथा शुक्रकिटकै उत्पादन ८.६ प्रतिशत कम हुने अध्ययनले देखाएको छ । बढि दुव्लो मानिसको अण्डकोषले उत्पादन गर्ने शुक्रकिटको गति तथा गुणस्तर समेत कमजोर हुने पाइएको छ ।
घामबाट छालालाई बचाउन दलिने सनस्क्रिन क्रिम पनि शुक्रकिटको सत्रु हुने देखिएको छ । सनस्त्रिmनको प्रयोगले सुक्रकिटको संख्यामा ३३ प्रतिशत सम्म कमी आउने देखिएको छ । सनस्त्रिmनमा हुने अक्टिनोक्जेट रसायनले हर्मोनको मात्रामा गडबडी ल्याइदिन्छ भने अक्जीबेन्जोनले शुक्रकिटको उत्पादनलाई सुस्त बनाइदिन्छ ।
भेना र सालीको राति राति रासलीला भिडियो सहित
मन थामेर हेर्नुहोस अरबि देशमा पुगेकी नेपाली चेली को दर्दनाक कहानी ( भिडियो सहित